Air Conditioning and Mechanical Ventilation for Young Myanmar Engineers Forum The Myanmar Environmental Forum • View topic - ဒီလိုလူငယ်လေးတွေ အများကြီးလိုပါတယ်
by acmv » Sat Apr 26, 2014 6:02 pm
အသက် ၂၀ ၀န်းကျင် အရွယ်လူငယ်လေးတစ်ယောက်။ ပုံစံက ခပ်အေးအေး။ ဆံပင်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဘေးခွဲ ခွဲထားတယ်။ ကားပေါ်မှာ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပဲ ဂျာနယ်ဖတ်နေတယ်။ ခရီးသွားမယ့်သူတွေထဲမှာ အုပ်စု တစ်စုပါတယ်။ သူတို.အုပ်စု ကားပေါ်တက်လာကတည်းက ကားပေါ်မှာ သူတို.ပဲရှိတဲ့အထာနဲ. အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ပြောနေကြတယ်။ တစ်ခြားခရီးသည်တွေကို ဖုတ်လေတဲ့ ငပိ ရှိတယ်လို.တောင်မထင်တဲ့ပုံ။
ဖြစ်ချင်တော့ ကောင်လေးထိုင်ခုံက လူရမ်းကားအုပ်စုရှေ.တည့်တည့်ကခုံ။
တစ်ခြားခရီးသည်တွေရဲ့မျက်နှာတွေမှာက လူရမ်းကားအုပ်စုကို ကြည့်မရလို. တင်းနေတဲ့ပုံစံပေါက်နေ
ပေမယ့်ဒီကောင်လေးမျက်နှာကတော့ ပုံမှန်ပဲ။ အားလုံးကို ဥပက္ခာပြုထားတဲ့ပုံပေါက်နေတယ်။ ရုတ်တရက် ဂျာနယ်ဖတ်နေရင်းနဲ. သူ.နှာခေါင်းထဲမှာ ရာဘာနံ.တစ်ခုရလိုက်တယ်။ ဖိနပ်ကလာတဲ့ ရာဘာနံ.။
မသင်္ကာလို.နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ နောက်ကအုပ်စုထဲက တစ်ယောက်ရဲ့ဖိနပ်က
ကောင်လေးက ရုတ်တရက် နောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ "မင်းကဘာကြည့်တာလည်း"
တဲ့။ မကျေနပ်ဘူးလား ဆိုတဲ့သဘော။ ဘေးကခရီးသည်တွေ ကောင်လေးအတွက် စိုးရိမ်သွားကြတယ်။ ကောင်လေးက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ ပြုံးပြပြီး "ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး.. အစ်ကိုကြီးတို.ပြောနေတာတွေကို စိတ်ဝင်စားလို. နောက်လှည့်ပြီး နားထောင်မလို.ပါ"
လေးစားအားကျနေတဲ့ပုံ။ သူတို.စကားပြောတာ နားထောင်နေရင်းနဲ. တစ်ခါတစ်ခါ "ဟုတ်လား .. မိုက်တယ်ဗျာ.. ခင်ဗျားတို.ကို အားကျတယ်" ဆိုတဲ့ အမြှောက်စကားလုံးလေးတွေ ထည့်ထည့်ပေးတယ်။ ဟိုအဖွဲ.ကလည်း သူတို.တပည့်တစ်ယောက်တိုးလာပြီဆိုပြီး ငါကွဆရာကြီးဆိုတဲ့ ပုံစံတွေပေါက်လာပြီး
ကောင်လေးကိုလည်း ခင်သွားတယ်။ လူမိုက်တွေဆိုတာ တပည့်လိုချင်ကြတယ်လေ။ရုတ်တရက် သူတို.အုပ်စုထဲကတစ်ယောက်က "ဆေးလိပ်သောက်ကြမယ်ကွာ"ဆိုပြီး စကားစတယ်။ Air-con ကားပေါ်မှာ ဆေးလိပ်သောက်ဖို.ပြောပြီဆိုကတည်းက အခြေအနေက မကောင်းတော့ပါဘူး။ အဲချိန်မှာ ကောင်လေးက
ကောင်လေးက အရဲစွန်.လူရမ်းကားအုပ်စုထဲဝင်ရောပြီး ပြဿနာကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြေရှင်းသွားတာပါ။ ပထမရင်းနှီးမှုယူတယ်။ ဒုတိယ ကိုယ်လိုချင်သလို ပုံသွင်းလိုက်တယ်။ ကဲ.. အသက်၂၀ လူငယ်လေးတစ်ယောက်အနေနဲ.ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းသွားပုံက ဘယ်လောက်အတုယူဖို. ကောင်းလည်းဗျာ။ ရန်ကုန်-ပွင့်ဖြူဆွဲတဲ့ "ရွှေပွင့်ဖြူ" အဝေးပြေးကားပေါ်မှာ ကြုံလိုက်ရတဲ့ တစ်ကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ။